Unokuba nombono wokuba uninzi lwabantu lunokubhala ephepheni. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba wonke umntu ngumbhali olungileyo. Ukubeka isivakalisi sokuqala ephepheni kunokuba ngumceli mngeni omkhulu kubabhali. Ukuba ufuna ukuqala ikhondo ngokubhala, eli nqaku liza kukunika ezona zifundo zibalaseleyo zasimahla kwi-Intanethi zababhali abatsha.
Kucacile ukuba umntu unokufunda phantse yonke into ekwi-Intanethi. Ukufunda ukubhala kwi-Intanethi kufana nokuhambahamba uye kuthenga evenkileni. Ukubhala kunokubonakala kulula kakhulu kuwe kodwa zininzi izitshixo zokuba ngumbhali olungileyo.
Ukuze ube nobuchule obukhulu ekubhaleni, kuya kufuneka unamathele kubuchwephesha obuchanekileyo obuya kukwenza ugqame phakathi kwabanye ababhali. Ke, kwabaqalayo abanqwenela ukuqhubela ikhondo ngokubhala, ezona zifundo zibalaseleyo zasimahla kwi-Intanethi zababhali abatsha kweli nqaku ukubheja kwakho.
Ndingaba ngumbhali ongcono njani?
2. Gcina inkqubo yesiqhelo
3. Sebenzisa imisebenzi yokubhala
4. Fumana ingxelo yemihla ngemihla
5. Ukwiqela lokubhala
6. Ziqhelanise neentlobo ezahlukeneyo zokubhala
8. Thatha izifundo zokubhala
Ndingasiphucula njani isakhono sam sokubhala kwi-intanethi simahla?
Ezona zifundo zibalaseleyo zaSimahla kwi-Intanethi zaBabhali abatsha
Igrama kunye neziphumlisi
Ixesha lesenzi kunye nePassifi
IsiNgesi sokuSebenza kweGrama
Qala ukubhala iintsomi
Ungaphumelela njani ekubhaleni iZicelo
Ukubhala ngokukhuphela: IziSeko zabaQalayo
Ukuqala ngokuBhala kwesincoko
Ukubhalwa kwengoma: Ukubhala iiNgoma
Ngelixa uninzi lwabantu lunokubhala, ayinguye wonke umntu ongumbhali ongcono. Ngaphambi kokuba ube ngumbhali ongcono, kuya kuthatha ixesha elithile ukuphucula izakhono zakho zokubhala. Gcina ukhumbula ukuba ayisiyonto ungayenza kwezi veki zimbalwa.
Ke ngoko, nazi iingcebiso ekufuneka uzilandele ukuze ube ngumbhali ongcono:
Ngexesha leentsuku zakho ze-kindergarten, ufundiswa indlela yokufunda (ukubiza amagama) kuqala ngaphambi kokubhala. Oku kuyafana kulo naluphi na uhlobo lokubhala.
Kuhlala kubalulekile ukuba ufunde kwaye uqonde ngaphambi kokubhala. Ewe awungekhe ubhale nje into ongayaziyo njengoko kuya kufuneka uyifunde kuqala.
Ababhali abakhulu bayaziwa ngokuba ngabafundi abanomdla. Xa ufunda kakhulu kwaye ngokuqhubekayo, ufumanisa iindlela ezintsha zokubhala. Ayipheleli apho. Uyakufumana imithombo yolwazi eya kuthi ikuncede uphucule izakhono zakho zokubhala kwaye ube ngumbhali ongcono.
Ngoku ukuba usebenzise ubuchule bokufunda ngokuqhubekayo, ngoku lixesha lokuba ubhale.
Esinye sezitshixo eziphambili ekuqaqambiseni izakhono zakho zokubhala ukuze ube ngumbhali ongcono kukuphuhlisa indlela yesiqhelo yokubhala. Ungaqala ngokumisela ixesha elithile ngosuku onokuthi ukhululeke ngalo. Inokuba ngexesha lokuzonwabisa-nokuba yimizuzu nje elishumi, sebenzisa nje elo xesha kwaye ubhale into.
Xa uqhubeka nokwenza oku yonke imihla kunye nokufunda izinto ezahlukeneyo, ingqondo yakho ikhula ngakumbi kunye nezakhono zakho zokubhala. Qinisekisa ukuba awuphoswa ziintsuku ezithile njengoko inokubuyela umva kuphuhliso lwakho.
Ukukhuthaza kunye nokuzilolonga kusebenza njengesikhokelo sababhali abatsha. Ngokusebenzisa iimpendulo, uya kufunda ukuqala kwesivakalisi sokuqala salo naluphi na uhlobo lokubhala. Umzekelo, ukufunda ubume bokubhloga kwebhlog, ukubhala isincoko, okanye isiseko sokwonwabisa, njl.
Zininzi izinto ezinyanzelayo kunye nokuzilolonga kwabaqalayo kwi-Intanethi. Umzekelo omkhulu wokukhawuleza ngu Ukubhala ngokukhululekileyo.
Elinye lamaqhosha okuba ngumbhali ongcono kukugcina irekhodi leziganeko zehlabathi lokwenyani. Ke, kulapho ufuna khona ingxelo yokugcina ingxelo.
Ezi ziganeko zobomi bokwenyani ziya kukunika inkuthazo yokuvelisa izimvo zamabali okanye izincoko oza kubhala kuzo.
Awunokwazi konke wedwa. Kukho ezinye izinto oza kuthi wazi komnye umbhali eziya kukunceda wakhe izakhono zakho zokubhala.
Ngesi sizathu, kuya kufuneka ujoyine iqela lokubhala apho kukho uthungelwano lwababhali kwiindawo ezininzi. Ngokujoyina iqela lokubhala, uya kuba nethuba lokufunda ngakumbi kubabhali abaziingcali kwicandelo.
Unokuba ulunge kakhulu kuhlobo oluthile lokubhala kodwa kuya kuba kuhle ukuba wazi ezinye iindlela zokubhala.
Ukuba ulunge kakhulu ekubhaleni isincoko, zama kwaye ufunde ubuxoki okanye ubhalo oloyikisayo. Oku kuyakwandisa ubuchule bakho bokubhala kwaye kukusethele amathuba amaninzi.
Awunakho ukubhala naliphi na iqhekeza lomsebenzi ngaphandle kokwenza uphando. Nokuba ungoyena mbhali ubalaseleyo kuphando ngelixa ubeka ndawonye nawuphi na umsebenzi.
Ke, ngaphambi kokuba ubhale, phanda kakuhle.
Ukuba ungumbhali omtsha, ukuthatha iiklasi zokubhala kuya kuba luncedo olukhulu kuwe. Ngokuthatha ezi klasi, uya kufunda ngeendlela zokubhala zamva nje kubabhali abaziwayo.
Iya kwenza iqonga lokuba ubabuze imibuzo kwaye ufumane ingxelo evela kubabhali abaziingcali.
Ukubhala yinkqubo ethe chu njengokufunda. Ababhali abakhulu abazange bazalwe benobuchule bokubhala obuhle. Baye babalasela ngokubhala kuba bancama lukhulu ukuphucula izixhobo zabo zokubhala.
Unokuba ngumbhali omkhulu ngokuhlonipha izakhono zakho zokubhala kwi-Intanethi ngaphandle kokuhlawula umrhumo. Ke ngoko, ezi zifundo zilandelayo ze-Intanethi ziya kukunika isiseko esomeleleyo ngokubhala:
Igrama yesiNgesi kunye nokuBhala kwesincoko
IsiNgesi seNtatheli: Iingcamango eziphambili
IsiNgesi seNtatheli: Intetho yasimahla kunye neNdlela yeendaba
Ukulungiselela i-AP * uLwimi lweeNgesi kunye noVavanyo lweSiqendu
Ukuba ungumlobi omtsha okanye wokuqala, ungabuphucula ubuchule bakho bokubhala ukuze ube ngumbhali ongcono ngokuthatha iikhosi zokubhala kwi-Intanethi.
Eyona khosi yasimahla yokubhala kwi-Intanethi yababhali abatsha ibandakanya:
Kule khosi, uya kuhlaziya imemori yakho kwizixhobo eziza kukunceda ukuphucula ukubhala kwakho. Ulwazi olufunyenwe kwikhosi luya kukunceda uqonde ezinye iikhosi.
Ikhosi iqulethe izifundo ezimfutshane zevidiyo oya kufunda kuzo. Emva koko, uya kuziqhelanisa nakho konke okufundileyo kwiividiyo. Kuya kukuthatha imizuzu elishumi (10) ukugqiba ikhosi.
Igrama kunye neziphumlisi ziquka ezi silabhasi zilandelayo kubandakanya ubuchule bokubhala, amaxesha ezenzi nezihlanganisi, ikhompawundi nezivakalisi ezintsonkothileyo, kunye neekoma ezingaphezulu, ulwakhiwo olufanayo, kunye neendidi zezivakalisi.
Ukugqitywa kwekhosi, uya kuba nakho ukuchonga amaxesha esenzi achanekileyo oza kuwasebenzisa, usebenzise iikhoma ngokufanelekileyo, kwaye ubhale ngokukuko Ulwimi lesingesi.
Le khosi ekwi-Intanethi ifundiswa nguTamy Chapman.
Ubude bexesha: iiveki 4
indawo: IYunivesithi yaseCalifornia, i-Irvine nge-Coursera (kwi-Intanethi)
Le khosi iya kuhlaziya ixesha lesenzi olifunde kwiiklasi zokuqala zesiNgesi. Uya kufunda kwakhona iindlela ezintsha zezenzi. Ukongeza, ikhosi iya kukufundisa indlela yokudibanisa amaxesha ezinto zokuthetha isiNgesi.
Uya kuba nokufikelela kuzo zonke iintetho zevidiyo kunye nezixhobo. Le khosi yenye yeekhosi zokubhala zasimahla kwi-Intanethi zababhali abatsha.
Emva kokuthatha le khosi, kuya kukunceda ukuba uphucule izakhono zakho zokuthetha isiNgesi.
Ikhosi inezilabhasi ezibandakanya simple, inkqubela phambili, kunye nexesha lokuphonononga kwesenzi ngokugqibeleleyo, ipheukuphazamisa amaxesha aqhubekayo, ipheassives kunye neemodyuli ezigqibeleleyo, kunye bAmaxesha okubolekisa.
Amaxesha ezenzi kunye namaPasi afundiswa nguTamy Chapman noNicole Jacobs.
IsiNgesi esiSebenzayo iGrama iya kukunceda ukuba uphucule ukuthetha nokubhala kwakho ngokubanzi ngegrama. Uya kufunda ngendlela yokwenza amabinzana nezivakalisi ezintsonkothileyo ngesiNgesi. Ukongeza, uya kufunda ukubhala imihlathi edityanisiweyo ngokwenza ukuba ukubhala kwakho kulungelelaniswe ngakumbi.
Ikhosi iqulethe iividiyo ezili-14. Uya kuthatha izabelo kunye nemibuzo emva kwecandelo ngalinye. Unokuzikhuphelela izabelo kunye neempendulo.
Le khosi yenye yeekhosi zokubhala zasimahla kwi-Intanethi zababhali abatsha.
Le khosi ifundiswa nguMartin Tilney.
Ubude bexesha: 2 - 3 iiyure
Kule khosi, uya kufunda ukuba ungaziphuhlisa njani izimvo kwaye ubonakalise ukubhala nokuhlela. Uya kuphulaphula ababhali abadumileyo malunga nendlela abaqala ngayo ukubhala. Aba babhali baquka uLouis de Bernières, Patricia Duncker, Alex Garland, Abdulrazak Gurnah, Tim Pears, Michèle Roberts, noMonique Roffey.
Emva kokuva kubo, uya kuphuhlisa izimvo zakho kwaye uqale ukuguqula imicimbi iyelenqe.
Ikhosi iya kukunika iqonga lokujonga kwakhona imisebenzi yabanye ababhali, ufumane ingxelo kubo ngomsebenzi wakho, kwaye ubanike nengxelo.
Ukuba unomdla ekubhalweni kweentsomi, le khosi yeyokubheja ngokuqinisekileyo kuwe. Le khosi yenye yeekhosi zokubhala zasimahla kwi-Intanethi zababhali abatsha.
Qalisa ukubhala iFiction ufundiswa nguDerek Neale.
Isatifikethi siyafumaneka kwi- $ 64
Umhla wokuqala: 5 kaJulayi ngonyaka
Ubude bexesha: Iiveki ezisibhozo (iiyure ezintathu ngeveki)
indawo: IYunivesithi evulekileyo ngeFutureLearn (kwi-Intanethi)
Le khosi iphonononga ukubhala kwescreenplay, ukubhala kwinoveli, kunye nokubhalwa komdlalo wevidiyo. Ngelixa uthatha le khosi, uyakudala ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda (IP) kwiprojekthi ye-transmedia. I-IP iya kuba neenguqulelo ezibhaliweyo ze-IP yakho kumaqonga awahlukeneyo.
Ukongeza, uya kubhala inoveli kwaye uhlengahlengise izahluko zokuqala kwimiboniso yokuvula yemovie okanye yenkqubo yeTV kwaye uphuhlise umxholo woyilo lomdlalo we-IP yakho.
Emva kokusebenza kwiprojekthi yakho, uya kuwupapasha umsebenzi ukuba oontanga bakho bawuphonononge kwaye uya kuwajonga nabo.
Le khosi ifundiswa nguTamy Chapman noNicole Jacobs.
indawo: IYunivesithi yaseMichigan State ngeCursera (kwi-Intanethi)
Le khosi yenzelwe nabani na ofaka isicelo semisebenzi okanye iinkqubo zemfundo. Kule khosi, uya kuva kubaqeshi nakwabahlohli bokungeniswa ukuze bazi ukuba bajonge ntoni kubagqatswa.
Uya kufunda ukuba ungazibhala njani izicelo ezinyanzelayo, ii-CV (okanye ii-CV), iileta zokugubungela, kunye neengxelo zakho.
Ungaphumelela njani ekubhaleni iZicelo yenye yeekhosi zokubhala zasimahla kwi-Intanethi zababhali abatsha.
Ikhosi ilawulwa nguHilary Jones kunye noPamela Hafekost.
indawo: IYunivesithi yaseSheffield ngeFutureLearn (kwi-Intanethi)
Le khosi yenzelwe abantu abanqwenela ukulandela ukubhala ikopi njengomsebenzi. Apha, uya kufunda ngendlela yokwenza amanqaku anyanzelisayo kunye afanelekileyo kumaphepha ewebhu.
La manqaku ajolise kubathengi abanokubakho ukwandisa ulwazi ngophawu, ukuqhuba ukugcwala, ukonyusa ukuthengiswa kweemveliso kunye neenkonzo, kunye nokwazisa abafundi.
Ukugqitywa kwekhosi, uya kuyazi indlela yokwenza amanqaku athengisayo kwaye uqale uhambo lwakho lokubhala ngokuzimela.
Ukubhala ngokukhuphela: Izinto ezisisiseko kubaQalayo zifundiswa nguMason Komay.
Ubude bexesha: iiyure 2
Le khosi iya kukwazisa kwezi ntlobo zithathu zezincoko zemfundo. Uya kufunda indlela yokuphucula izakhono zakho zokubhala emva kokuthatha le khosi.
Ukugqitywa, uya kuba nakho ukubhala iingxelo zethisisi kwizincoko kunye neziqendu zomzimba eziphuhliswe kakuhle. Uyakukwazi nokucwangcisa nokubhala, thelekisa kunye nokuthelekisa, unobangela kunye nefuthe, kunye nezincoko zempikiswano.
Umhla wokuqala: Ngomhla wama-24 kuMeyi ngonyaka
Ukuba unetalente yomculo, le khosi iya kwenza ukuba ukwazi ukuyisebenzisa. Unokukhangela ukuba ungaqala njani ukubhala le ngoma engqondweni yakho kodwa awazi ukuba ungayenza njani malunga nayo.
Ke ngoko, le khosi iya kukufundisa ngenkqubo esebenzayo nesebenzayo yokulungiselela iingoma ukuvakalisa izimvo kunye neemvakalelo zakho. Uya kuqala ikhosi ngokufunda izixhobo ezisetyenziselwa isingqisho somhobe. Ezi zixhobo ziya kukunceda ukuba usebenze ngokuvisisanayo ngelixa uphuhlisa ukusweleka kwakho ngaxeshanye.
Ikhosi iqulethe ii-asayinimenti oya kuzenza kwaye uzipapashe ukuze zijongwe kwakhona. Ezi zabelo ikakhulu yimigca yeengoma okanye amacandelo okanye iingoma.
indawo: Ikholeji yaseMerklee yoMculo ngeC Coursera (kwi-Intanethi)
Kule khosi, uya kufunda ukuba ungazibhala njani iingxelo ezahlukeneyo zobuchwephesha kubandakanya iingxelo zophando, iingxelo zelebhu, uyilo kunye neengxelo ezinokwenzeka, iingxelo zenkqubela phambili, kunye neengxelo zokubonisana.
Uya kufunda kwakhona iilwimi, ulwakhiwo, kunye nezitayile ezisetyenzisiweyo ukubhala ezi ngxelo.
Emva kokugqiba ikhosi, uya kufumana izakhono zokubhala ezifunekayo ukunxibelelana nolwazi oluqokelelwe kumsebenzi wakho wobugcisa okanye wokulinga.
Umhla wokuqala: Ngomhla wama-17 kuMeyi ngonyaka
indawo: Iziko laseMoscow leFizikiki kunye neTekhnoloji ngeC Coursera (kwi-Intanethi)
Iikhosi ezili-13 eziSimahla kwi-Intanethi zoBhaliso loMxholo
I-10 yeeDyunivesithi eziGqwesileyo kuNcwadi lwesiNgesi kunye nokuBhala ngokuBumba
Iindawo ezili-15 zokufumana uvavanyo lwesiNgesi ngeempendulo zePDF
Uvavanyo lwesiNgesi sasimahla kwi-Intanethi kunye neSatifikethi
Post Previous:Imisebenzi ePhambili ye-15 eMfuno eKhanada yaBafundi beZizwe ngezizwe
Okulandelayo Post:I-10 zeYunivesithi eziPhezulu e-China zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Pingback: Iingcebiso eziluncedo zokuBhala iNgxelo yoBuqu ka-2021